Ny lisitry ny fanomanana ny fandidiana MAI - Medical Aid International
Ny fandidiana MAI
Lisitry ny fanomanana
Amin’ny maha-fikambanana antsika, tompon’andraikitra amin’ny torohevitra sy fampitaovana karazana klinika isan-karazany amin’ny toerana iva izahay. Anisan’izany matetika ireo sampana fandidiana.
Ny traikefanay momba ny fitantanana ireo tetik’asa ireo, na amin’ny lafiny toro-hevitra na fikarakarana fitaovana, ary koa ny fizotran’ny asa aman-draharaha sy ny fiofanana dia nahatonga anay hanoratra lisitra fizahana hitarika ireo izay ao amin’ny tontolon’ny efitrano fandidiana. Ny tanjonay dia ny ahafahan’izy ireo mitantana departemanta azo antoka sy mahomby ary manampy amin’ny fiantohana ny fampiharana tsara rehefa lasa izahay. Raha jerena dia tsy dia misy fiofanana firy ho an’ny mpiasa ao amin’ny efitrano fandidiana izay hitanay fa nilaina lisitra lehibe toy izany. Ankoatr’izay, te-hamorona fisainana fiomanana izahay.
Nasehonay ny zava-misy iainan’ireo tontolo iainana ambany ao amin’ilay lisitra, indrindra ny efitrano fanarenana izay matetika tsy dia jerena firy.
Raha ny fanaraha-maso ny marary dia ny fijerinay fa ilaina ny fanaraha-maso ny tosidra ary koa ny oximetry pulse ary hita taratra ao anaty lisitra izany. Ireo, miaraka amin’ireo kojakojam-pitaovana hafa dia misy avy aminay. Izahay dia manana tanjona kendrena namboarina izay mifanaraka amin’ny masonay. Izy io dia hozahana amina famotopotorana oximetry pulse olon-dehibe, zaza an-jaza, ary zaza vao teraka ary karazana lamba lava-pandehanan-dra sy olon-dehibe. Hisy CO tsy voatery 2 fahaiza-manao ary azo omena miaraka na tsy misy fijanonana na trolley fitehirizana. Raha te hahita izay apetrakay ao anaty kitapo vonjy taitra izahay dia jereo ny fizarana fampahalalana misimisy eto ambany.
Ny lisitra dia tsy lisitra fizahana klinika. Noho izany, ankoatry ny fototr’aretina feno momba ny famantarana ny marary sy ny famantarana ny toerana anaovana fandidiana, dia tsy apetraka ny fanontaniana manodidina ny allergy, ny antibiotika protokolita sns. Ireo dia fanontaniana momba ny klinika izay tsapanay fa ny valiny dia tokony hohamarinina sy hamporisihan’ny mpiasa klinika. Nahatsapa izahay fa zava-dehibe ny tsy lava loatra na be korontana ny lisitra ka nahatonga anay hiantoka ny familiana ireo.
Ny lisitra dia azo ampiasaina ho toy ny memoire fanampiana ho an’ny mpampianatra efitrano fiasan’ny mpiasa, dia hanoratra naoty fampianarana izahay miaraka aminy. Ho avy tsy ho ela ny kinova frantsay sy espaniola.
Sintomy amin'ny teny anglisy
Sintomy amin'ny teny frantsay